Webhusaiti Tora II
New Webhusaiti, Tora II
Chitatu, October 27, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Nick carter
Ndakaita hurukuro huru mangwanani ano na Jeb kubva kudiki bhokisi. (Ndizvozvo, ndakamudadira. Kana iwe usingazive kuti Jeb ndiani, wanga uripi?) Usambofa wakayeuka chokwadi chekuti ndakanganisa kuraira zvakapetwa kaviri, uye handigoni kubata maoko angu izvozvi, Ndine chokwadi chekuti zvaakataura kwandiri zvaizoita kunge zvakadzama pasina iyo yakakwira-inotyairwa necaffeine.
"Saka, vatengi vako vatumwa ndivanaani?" Ndakabvunza, kutarisira kunzwa nezve indasitiri, saizi, uye zvimwe zvinotsanangurwa niche.
"Tiri webhusaiti yechipiri yekambani." Jeb akandiudza. "Vanofanira kunge vakaita izvi kamwe chete kare."
Chepiri? Iye anoda kutevedzera imwe yejasi-miswe? Kana kuti ane chivimbo chekuti achazoita zvirinani, anoda kupenya makwikwi. Kunyange. Iye anongofarira kushanda nemutengi akangwara. Mutengi anoziva zvavanoda, nei vachizvida, uye izvo zvisina (uye nenzira inoshamisa) zvakashanda kekutanga.
Chekutanga pane zvese, kana iwe usina webhusaiti, kanda imwe kumusoro. Jeb ndizvozvo. Unogona kupedza makore uchifungisisa pamusoro pezviri mukati mako, dhizaini, chimiro chevhi, mapoinzi ekushandura, nezvimwe. Izvo zvaizoitira imwe heck yeinonakidza kesi yekudzidza yeimwe koreji mudzidzi wepamusoro purojekiti. Asi mushure memwedzi mitatu, uchazoziva kuti wanga wakanganisa. Zvino, unogona kunge wakakanganisa zvakanyanya, kana kuti unogona kunge wakanganisa zvishoma. Asi warasika.
Usazvidya moyo. Kuva usina kururama ndiyo inokurumidza nzira yekuva akarurama. Kunyangwe iyo nyanzvi yekugadzira, Robby Slaughter, inokurudzira vanhu kuti vabude pachena vatadze. Kusvikira paJeb, kana iwe uchinge watadza - kunyangwe zvisizvo zvisirizvo - iye zvino anogona kushanda newe. Iye zvino anogona kunyatso kukubatsira iwe uye nekuisa matarenda efemu yake kusevhisi yavo yakanakira iwe.
Zvino, ngatiti iwe uchitova newebsite. Iri kushanda here? Iri kushanda nenzira yaunoda iwe here? Wadii kuzviitazve?
Kakawanda kazhinji, vanhu vanobata mawebhusaiti sekurapa kwavakaita chibatiso mumazuva apfuura kudhinda kwedigital. Ita kuti ive yakakwana kutanga, nekuti zvinoda mari yakawanda kuti uwane "up to colour" zvekuti unofanirwa kumhanyisa 10k kana zvimwe zvezvidimbu izvi kuti ubatsire mari yacho. Uyezve, kana ichinge yadhindwa, usatombotaura nezvekuchichinja kwegore kana kupfuura. Kanganwa izvozvo. Mawebhusaiti emahara zvimedu uye zvezve kuita. Zvakanaka, kwete chaizvo yemahara. Asi iyo tekinoroji inoita kuti zvikwanisike kuchengetedza ino quintessential yekushambadzira chishandiso mune isingagumi beta, usambotya kuitazve
Chiitiko chekudzidza chekutanga webhusaiti yako yekutanga hachigone kutsiviwa. Asi, ndezve ichi chikonzero chaicho chekuti webhusaiti yako, tora II, ichave saiti iyo inonyatsoita mutsauko. Tora 3, 4, uye 5 zvinogona chete kuita zvirinani. Asi iwe unofanirwa- UNOFANIRA KUTI-enda nenzira yekutora ini usati wagona nhanho iwe yaunoda. Yakagadzirira, moto, chinangwa. Uyezve, tarisa zvakare uye zvakare.
Yeanodiwa John Tsamba angadai akave Akanaka, Google!
Gumiguru 27, 2010 pa 9:57 AM
Ndinoda zano raJeb! Semugadziri wesoftware, ini ndinoona iyi iri nzira yakanaka yekubhadhara vatengi vanoda kuvaka chigadzirwa chitsva chesoftware: vakamboita chimwe here?
Ndiri mu freelancing yehukama hwenguva refu. Ndosaka ini ndichifarira kushanda pawebhu, software inogara ichishanduka uye ichivandudza. Iyo software inova nani sezvo hukama hwedu (hwangu nevatengi vangu) hunokura.
Saiti yangu (tinya kuti ugadzirise)
Gumiguru 27, 2010 na8: 01 PM
"Webhusaiti yako iri kushanda here?" Ndingapikisa kuti makambani mazhinji haazive kuti "kushanda" zvinorevei. Ndosaka isu tisiri mubhizinesi rewebhusaiti, tiri mubhizimusi rekushambadzira rinopinda. Isu hativake mawebhusaiti evatengi vazhinji… izvo zvakasiirwa kune vanhu vakaita seJeb… asi kana webhusaiti iri nzira pakati petarisiro nemutengi wedu, tinova nechokwadi chekuti mugwagwa wakagadzirwa uye wagadzirira kuenda!
Nov 5, 2010 na4:46 PM
Ichokwadi! Kuedza kwako kwekutanga kunenge kwakashata.
Fred Brooks, munyori webhuku rinonzi The Mythical Man-Month, anoti: “Ronga kurasa imwe. Uchadaro, zvakadaro."